खुट्टा सुन्निने बानीलाई सामान्य लिने गर्दा यस्तो समस्या आउन सक्छ, जान्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
खुट्टा सुन्निनु आजकल सामान्य समस्या हुन थालेको छ । यसको कारण सरलदेखि अत्यन्तै जटिल सम्म हुन सक्छ । हाम्रो हातको औलाको टुप्पाले ३० सेकेण्डजति खुट्टामा थिच्दा खाल्टो जस्तो परेको देखिन्छ भने हामीलाई हाम्रो खुट्टा सुन्निएको छ भने थाहा हुन्छ ।
खुट्टा सुन्निदा हिड्न, चल्न, जुत्ता लगाउन गाह्रो हुने, अप्ठ्यारो हुने गर्छ भने हामीलाई उक्त समस्या खुट्टा सुन्निएको कारणले पनि हुन सक्छ । खुट्टा सुन्निने समस्या महिलाहरूमा बढी हुने गर्छ । विशेष गरेर जतातिर फर्केर सुत्ने गरिन्छ उतापतिको खुट्टा बढी सुन्निन सक्छ । केहि कुराले थिचिएर हाम्रो खुट्टाको रक्तनलीमा जोर पुगेर समस्या देखा परेमा पनि हाम्रो खुट्टा सुन्निन सक्छ ।
रक्तनलीमा रगत जमेर रक्त सञ्चालन नभएको खण्डमा हाम्रो एउटा मात्रै खुट्टा पनि सुन्निन सक्छ । बेला बेला हाम्रो खुट्टा सुन्निने सामान्य कारण हुनसक्छन् । कस्सेको जुत्ता लगाउदा, दैनिक धेरै समयसम्म उभिनुपर्ने वा एउटै स्थानमा धेरै बेरसम्म बस्नु पर्ने वा खुट्टा झुण्डयाएर बस्ने गर्दा हाम्रो खुट्टा सुनिने गर्छ । यस किसिमले सुन्निएको खुट्टाका लागि हामीले खासै पीर गर्नु पर्ने हुदैन ।
यस अवस्थामा हामीलाई कुनै उपचारको जरुरी हुर्दैन । यो एक दुइ दिन सम्ममा आफै निको भएर जाने गर्छ । धेरै जसो मोटोपनाले सताएको मानिसलाई पनि खुट्टा सुन्निनेको प्रमुख कारणहरु हुन् । साथै, रक्तचाप नियन्त्रण गर्ने औषधीको कारणले पनि खुट्टा सुन्निने गर्छ । औषधिका कारणले सुन्निएको खुट्टालाई निको पार्नका लागि उक्त औषधीको परिवर्तन गरेको १ वा २ हप्तामा घट्ने गर्छ ।
उच्च रक्तचाप भएका वेला र गर्भवती भएका महिलाहरुलाई वा अन्य रोगहरु लागेमा पनि हामीलाई खुट्टा सुन्निने रोगले सताउने गर्छ । यसका साथ साथै मुटु कमजोर भएमा, मुति समबन्धि रोग लागेमा, दम भएमा, फोक्सो सम्बन्धि रोगहरु भएमा, मृगौलाले काम नगर्दा, विभिन्न मृगौला सम्बन्धि रोग हुदा वा थाइराइडको कमी भएमा हाम्रो खुट्टा सुन्निने गर्छ ।
हामीले सकेसम्म बस्ने बेलामा खुट्टालाई नझुण्डद्याइ टेबुलमा राख्ने गर्नुका साथै सुत्ने बेलामा खुुट्टालाई राम्रो संग राखेर सुत्ने गर्नु पर्छ । यसबाट खुट्टा सुन्निएको कम हुनुका साथै यस्तो समस्या बारम्बार दोहोरिदैन ।
यदि एक दुइ दिनमा यो समस्याको समाधान नभएको खण्डमा वा खुट्टा सुन्निनुका साथै स्वाँस्वाँ, छाती दुख्नु, पेट पोल्नु, पिसाब कम हुने लक्षण देखा परेमा हामीले डाक्टरकहाँ जानु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले मृगौला रोग विशेषज्ञ तथा मुटु रोग विशेषज्ञहरुको मा जानु उचित हुन्छ ।
खुट्टा सुन्‍नियो भने कसलाई जँचाउने?
साधारणतया खुट्टा सुनिने समयस्यालाई मानिसले समान्य मानिरहेको हुन्छन्। खुट्टा सुन्‍निने कारण सामान्यदेखि जटिलसम्म हुन सक्छ।
त्यसकारण कुनै जटिल समस्या नआओस भन्‍नका लागि खुट्टा सुनिने बितिकै जति सक्दो छिटो समस्याको पहिचान गरी निदानको उपाय खोजीनु पर्ने बताउछन् वीर अस्पतालका मुटु रोग विषेशज्ञ डा. हरीहर खनाल।
खुट्टा सुनिएको कसरी थाहा पाउने?
खुट्टाको हड्डी वा गोलीगाँठो भन्दा माथि औंलाले थिच्दा सुन्निएको भए खाल्डो देखिन्छ। औलाको टुप्पाले ३० सेकेण्ड जति खुट्टामा थिच्दा सुन्निएको छ भने थाहा हुन्छ। सुन्निएको कारणले हातको औलामा औंठी लगाउन गाह्रो हुन सक्छ। जुत्ता लगाउँदा गाह्रो हुने, हिड्दा खुट्टा दुख्ने वा अप्ठ्यारो हुने आदिखुट्टा सुन्निएको कारणले हुन सक्छ।
खुट्टा सुन्‍निने के के कारण हुन सक्छन?
डा. खनालका अनुसार खुट्टा सुन्‍निने धेरै कारणहरु मध्ये मुटु, मृगौला र फोक्सोका रोगहरु प्रमुख हुन। मधुमेह, उच्च रक्तचाप र थाइराइडको कमी पनि प्रमुख कारणहरु मानिन्छ।
कतिपय अवस्थामा उमेर ढल्किदै जाँदा पनि खुट्टा सुनिने समस्या देखिन्छ।त्यसमध्ये पनि मुटु र मृगौला सम्बन्धी कारणहरु सबभन्दा जटिल मानिन्छन्। यसको लागि तुरुन्तै आवश्यक जाँच गर्दा राम्रो हुन्छ।
त्यस्तै युवा पुस्तामा थाइराइडका कारण खुट्टा सुनिन्छ भने कतिपय अवस्थामा खुट्टामा रगतको संचार राम्रो संग नहुदा पनि सुनिने समस्या देखिन्छ। त्यस्तै नुन धेरै खाने मान्छेमा पनि खुट्टा सुनिने समस्या अधित देखिन्छ।
कहिले काहिँ खुट्टा विभिन्न कारणले सुन्निने गर्छ जस्तैः मोटोपना, गर्भावस्था, दैनिक धेरै समयसम्म उभिनुपर्ने वा एउटै स्थानमा धेरै बेरसम्म बस्नु पर्ने जस्तैः सवारी चालक र गार्ड इत्यादि।यसको लागि खासै चिन्ता भने गर्नु पर्दैन। यस्तो अवस्थामा कुनै उपचारको जरुरी हुर्दैन।
कतिपय अवस्थामा औषधीको कारणले पनि खुट्टा सुन्निन सक्छ।यदि औषधिका कारणले सुन्‍निएको हो भने औषधी परिवर्तन गरेको १–२ हप्तामा घट्छ।
एउटा मात्रै खुट्टा सुन्‍िनएपछि के गर्ने?
सामान्यतया दुइटै खुट्टा सुन्‍निछ, तर कहिलेकाँहि एउटा खुट्टा कम सुन्निएको हुनसक्छ। विशेष गरेर जतातिर फर्केर सुतिन्छ, उतातिरको खुट्टा बढी सुन्निछ । एउटा खुट्टामात्रै सुन्निएको छ भने तुरुन्तै कारण पत्ता लगाउनुपर्छ।
खुट्टाको रक्तनलीमा समस्या भएमा एउटा मात्रै खुट्टा सुन्निन सक्छ। यसलाई डीप भेन थ्रोम्बोसिस भनिन्छ। रक्तनलीमा रगत जमेर रक्त संचार नहुदा पनि एउटा मात्रै खुट्टा सुन्निन सक्ने संभावना रहन्छ।
मुटु वा मृगौलाको कारणले सुन्‍निएको हो भनेर कसरी थाहा पाउने?
मृगौलाको कारणले सुन्निएको हो भने बिहान उठ्ने बेलादेखि नै अनुहार सुन्निएको हुन्छ र दिन बित्दै जाँदा सुन्निएको घट्न थाल्छ । मृगौलाको कारणले अनुहारमा बढी र खुट्टामा कम असर पर्दछ। तर जटिल अवस्थामा खुट्टामा पनि बढी असर देखिन्छ।
मुटुको कारणले खुट्टामा बढी र अनुहारमा कम सुन्निएको देखिन्छ। बिहानमा कम र साँझ बढी सुन्निएको देखिन्छ। खुट्टा सँगै हात, आँखाको वरिपरि वा अनुहार पनि सुन्नियो भने केही न केही समस्या हुने सम्भावना बढी हुन्छ।तर मुटुको कारण ले हो भने, मुटुको जाँच गरेपछि यो कुरा के हो पत्ता लाग्छ। त्यसका लागी छातीको एक्सरे, इसीजी र इकोकार्डियोग्राफी गर्नु जरुरी हुन्छ।
खुट्टा सुन्‍नियो भने कसलाई जँचाउने
खुट्टा सुन्निएमा तुरुन्तै आत्तिनु हँदैन। खुट्टा मात्रै सुन्निनु र अरु केही लक्षण देखा पर्छन्।
यस्तो समस्या देखिन्छ भने तुरुन्त मेडिकल परामर्श लिनुपर्छ। यसमा धेरै जसो बिरामीको मुटुको परिक्षण गर्नुपर्ने भएकाले मुटुरोग विशेषज्ञलाई भेट्नुपर्ने जरुरी हुन्छ।
मृगौलाको कारणले पनि खुट्टा सुन्निने गर्दछ।प्रारम्भिक जाँचमै पिसाब र मृगौलामा खराबी देखिएमा नेफ्रोलोजिष्ट मृगौला रोग विशेषज्ञ लाई भेट्नु जरुरी हुन्छ।
घुँडा, कुहिनो, गर्धन, कुम, छाती र हिपको जोर्नीमा दुख्ने रोग के हो ?
Don't Miss it कुर्सीमा धेरैबेर बसिरहनु कति जोखिमपूर्ण ? जोखिम कसरी कम गर्ने ? जान्नुहोस्
Up Next बिहान उठ्ने बित्तिकै के गर्ने के नगर्ने ? जान्नुहोस्
कुरिलो खादाका फाइदाहरु
१. कुरिलोको नियमित सेवनले क्यान्सर रोग लाग्नबाट बचाउँछ साथै क्यान्सर रोगीका लागि फाइदाजनक हुन्छ । २. यसलाई विभिन्न रोगहरुमा अत्यन्त लाभकारी…
कन्या र तुलाको प्रेम सम्बन्ध कुन राशी भएको मानिससँग राम्रो ?
तपाईको राशी कुन हो ? अथवा, तपाईले मन पराउँनु भएको मानिसको राशी कुन हो ? तपाईलाई आफ्नो सम्बन्ध कस्तो होला…
यस्ता छन्, सुत्दा गरिने केहि गल्तिहरु
अलार्म लगाउनेः कतिपयले अलार्म लगाएर मध्ये रातमा निन्द्राबाट ब्युतिएर आफ्नो काम सकेर फेरि सुत्ने गर्छन् । विशेषगरी कलाकार, साहित्यकार तथा…
भिटामिन ई कुन खानेकुराबाट पाइन्छ ? यस्ता छन्, भिटामिन ईका फाइदा
भिटामिन ई कुन खानेकुराबाट पाइन्छ ? सकरखण्ड तोरी सलगम एवोकेडो ब्रोकाउली आँप मकै अन्डा ड्राई फ्रट्स बदाम ओखर सुर्यमुखीको बीउ…
यस्ता खानेकुरा नखानुहोस् ​ब्रेकफास्टमा
​ब्रेकफास्टमा नखानुहोस् यस्ता खानेकुराबिहानको खाजा आर्थात् ब्रेकफास्ट मानिसका लागि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । स्वस्थकर ब्रेकफास्टले पूरै दिनलाई सुखद बनाउँछ ।…